रेखा थापा भन्छिन्– ‘जंगबहादुर’ जन्माउने रहर छ
२०७५ असार ११ सोमबार ११:३४:००
रेखा थापालाई सिने जगतकी नायिका, निर्मात्री र निर्देशकमात्र भनियो भने अन्याय हुन्छ । पछिल्लो समय राजनीतिमा पनि सक्रिय छिन् । एनेकपा माओवादी, राप्रपा हुँदै राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) पुगेकी थापालाई राजनीतिकर्मीमात्रै भनियो भने पनि अन्याय हुन्छ ।
उनी सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् । सिने जगतमा ‘हिम्मतवाली’ नायिकाको उपमा पाएकी थापा पर्दामा ‘रिल’मा मात्रै होइन ‘रियल’मा पनि उस्तै ‘बोल्ड’ छिन् ।
केही समयअघि ‘छोरीका लागि स्वर्णीम नेपाल’, दाइजो, बालविवाहविरुद्ध अभियान लिएर पश्चिम तराईका विभिन्न जिल्ला पुगेकी थापा समाजमा नवीन र नूतन नारी चरित्र स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा छिन् । मध्य र सुदूरको भूखण्डमा नारीजातिलाई अकाल मृत्यु थमाउने प्रथा समेटिएको ‘मालिका’ आगामी कात्तिकको अन्त्य, लक्ष्मीपूजाको दिन प्रदर्शनमा आउँदैछ । त्यसो त उनी सिनेकर्मी कम सामाजिक परिवर्तनको सम्वाहक ज्यादा हुन् । यिनै थापासँग बाह्रखरीकर्मी अक्षर काकाले गरेको राजनीतिक संवाद ।
“रेखा थापा किन अस्थिर ?,” अक्सर ममाथि तेर्सिइरहने जिज्ञासा हो यो । कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ— रेखा थापा नायिका, निर्देशक, निर्मात्री र राजनीतिकर्मी होइन, ऊ केवल प्रश्न हो ।
राजनीतिक चेत र दृष्टिकोणमा म असाध्यै सङ्लो छु, उस्तै प्रष्ट पनि । राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामात्रै होइन देशले दैनन्दिन भोगिरहेको समस्याबारे चिन्तित छु ।
पछिल्लो समय पढिरहेको छु— राष्ट्रियताका अनेक आख्यान, उपाख्यान । व्याख्यान, उपव्याख्यान । हिजो देशलाई आवश्यकता परेका बेला माटो छाडेर टाप कस्ने । अनुकूल भएपछि मूल बाटो खोज्दै आउनेहरू ठूल्ठूला श्वरले चिच्याइरहेका छन् । तिनका कृत्रिम भीडभाडबाट परै रहेकोमात्रै हुँ ।
दुनियाँलाई थाहा छ— म यस्तो समयमा सिने उद्योगमा प्रवेश गरेँ । तिनताक नेपाली सिने क्षेत्र चौपट थियो । नेपाली चलचित्रले दर्शक पाउने अवस्था थिएन । नायकनायिका बेरोजगार थिए । कति पलायन भएर विदेशको बाटो रोजी सकेका थिए । निर्मात्रा चलचित्रमा हात हाल्नु आगाको भुंग्रोमा हात हाल्नुझैँ दुरूह ठान्थे ।
यो भन्दा कत्ति पनि दम्भ र ढोँग प्रस्तुत हुँदैन— मेरो आगमनले मुर्झाउँदै गएको सिने क्षेत्रले त्राण पायो । भनौँ न, मेरो उपस्थितिले सिने क्षेत्रमा पनि ‘हिम्मतवाली’ नारीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै गयो ।
केही समय भयो, ‘नेपत्थ्य’मा बसेर नेपाली समाजको मनोदशा नियालिरहेको छु । अहिलेका पुस्ताको समय सामाजिक सञ्जालमा नयाँनयाँ ‘भगवान’ जन्माउँदै खर्च भइरहेको छ । आफूभित्रको नायकत्व मारेर, अरूलाई ‘हिरो’ बनाउन अभिशप्त छन् उनीहरू । हरेक घटनामाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ने बुझ पचाइरहेका छन् तिनले, शायद ।
अघिल्लो दिन ‘भगवान’ बनाउँछौँ । भोलिपल्टै ज्या...! ‘राक्षस’ पो परेछ भन्दै थकथकी मान्छौँ । देवत्वकरण र तेजोवधको खिचातानीले हाम्रो पुस्तामा आइपुग्दासम्म पूर्णविराम नपाएको देख्दा उदेक लागेर आउँछ । आफूप्रति भरोसा नहुनेले शायद यस्तै नियति भोग्नुपर्छ । तर, म यसप्रकारको अस्थिर छैन । समाजप्रतिको दायित्वमाथि सौदाबाजी गरेको छैन । कर्तव्य सिरानी हालेर सुती बसेको पनि छैन म ।
परिवर्तनको दीर्घयात्रामा छु । हुनसक्छ, अहिले त्यसको प्रत्याभूत गराउन सकेकी छैन । यसर्थ मानिसहरूलाई मेराबारे टिकाटिप्पणी गर्ने सुविधा मिलेको होला ।
विचार परिवर्तन होइन, परिमार्जन
धेरैले सुझ न बुझ टिप्पणी गर्न हतारिएको पाएँ— रेखा थापाले राजनीतिक धार बदली । सयमसमयमा उसको विचारमा बदलाव आउँछ । म तिनलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु— के खोला एकैधारमा बगेर समुद्रसम्म पुग्छ ? आज अस्तित्वमा रहेका पार्टीहरूको इतिहास केलाउनुहोस्— ती कुन विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक विचारधाराको ओत लागेका थिए, अहिले कहाँ छन् ?
हिजो माओवादी जनयुद्धमा विश्वास राख्थ्यो, एमालेको राजनीतिक ‘लिगेसी’पनि त्यही हो । कांग्रेसको इतिहास पनि मारकाटकै हो । तर, आज त उनीहरूले त्यो विचार बोकेका छैननन् । बरु कटू आलोचक भएका छन् ।
तर, रेखा थापाले राजनीतिक चेत र विचार परिमार्जन गर्दैमा यत्रो हल्ला ?
निःसन्देह म माओवादीमा थिएँ । पार्टीमा नभए पनि माओवादीले उठाएका केही अजेन्डामा म अद्यपर्यन्त छु । तर, मैले बाटो बिराएको छैन । बाटो त उनीहरूले पो छाडे । जो सशस्त्र संघर्षमा विश्वास गर्थे । संसदीय अभ्यासप्रति असाध्यै असहमति राख्थे । तिनै पछि संसदीय भासमा उत्रनै नसक्ने गरी जाकिए । संसदीय गर्तमा निःशर्त डुबे । समाज र राष्ट्र हित सर्वोपरी ठान्थे । अहिले सत्ता र शक्तिकै वरिपरि छन् ।
मैले माओवादी छाडेको होइन, माओवादीलेचाहिँ माओवादी छाड्यो । जनताको विश्वास छाड्यो । तेत्रो जनयुद्ध लडेर आएका घाइते योद्धा, शहीद परिवारको सपना छाड्यो । अनेक गठबन्धनका नाममा माओवादी स्वयम्ले माओवादीको अस्तित्व छाड्यो । अनि रेखा थापामात्रै माओवादी भइरहनुपर्ने ? सरी !
सबैले बुझ्ने भाषामा भन्छु— पहिलो, जहाँ ‘फेलियरहरू’ हुन्छन्, त्यहाँ रेखा थापा अटाउँदिन । दोस्रो, एउटा चुनाव हार्दैमा निराश हुन, अताल्लिएर तिल्मिलाउन म माओवादी भएकी थिइनँ । तेस्रो, म राजनीतिमा भर्ना भएकी छु । विश्वविद्यालय फेरिफेरि पढ्छु । एउटै विश्वविद्यालयबाटमात्रै विशेषज्ञता हासिल गर्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छैन । रेखा थापालाई मात्रै यो नियम लागु हुँदैन ।
पार्टीमा दिग्गज भइसकेकी छैन । मन्त्री, सांसद् भएर पार्टी फेरेकी पनि होइन । सिकाइको क्रममै छु । सिकाइको पूर्वार्द्धमै भएको व्यक्तिबारे अनेक टिप्पणी शोभनीय होइन ।
छद्म भेषमा राजनीति
केही वर्षपछि थाहा पाउनुहुनेछ— अहिलेका चर्चामा रहेका समाजसेवी धेरैजसो राजनीतिमा सक्रिय हुनेछन् । अहिले समाजसेवाको आवरणमा राजनीतिको बाटो बनाइरहेका छन् । ढोँग र पाखण्डको बर्को ओढेर कतिपय समाजसेवाको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् ।
तर, म छद्म भेषमा छैन । मैले त खुलम्खुला भनेकी छु— रेखा थापा राजनीतिमा सक्रिय हुन्छे । र, चलचित्र क्षेत्रलाई पनि सँगै लैजान्छे । राजनीतिमा लागेर मन्त्री, सांसद् बन्ने मेरो लक्ष्य होइन । त्यो ध्येयले राजनीतिमा आएकी पनि होइनँ ।
नेपालको कानुन, विधि र प्रक्रियाकै बाटो भएर म राजनीतिमा सक्रिय रहनेछु । ढोँग र आडम्बरको आडमा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्ने अभिनयात्मक कार्यशैली र चिन्तनको घोर विरोधी भने हुन्छ मलाई ।
शिष्ट तवरले समाज बदल्ने मेरो अभिष्ट
दोस्रो संविधानसभाताक तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले टिकट दिएको थियो । संसद् बन्ने बाटो खुलेको पनि थियो । तर, राजनीतिक हिसाबले म एकदम केटौले थिएँ । मतदाता नामावलीमा नामै नभएकाले संसद् बन्ने सम्भावना पोल्टाबाट उम्कियो ।
अहिले सम्झन्छु— समयभन्दाअघि केही पनि पाइँदो रहेनछ । खैर, सिकाइको विशिष्ट प्रक्रिया थियो त्यो । त्यसले मलाई नराम्रो गरेन । खारिने र तिखारिने मौका पाएँ भनौँ न ।
अहिलेको सन्दर्भमा म सिद्धान्तसँग व्यहारको सामञ्जस्यता हुँदैन । पार्टीभित्र बस्दा ढोँग र पाखण्डको दुर्गन्धले नाक थुनेर बस्नुपर्छ भने म कसैको पार्टी कार्यालय कुरेर बस्दिनँ । झोला बोकेर त म हिँड्दै हिँड्दिनँ ।
आफैँ ओत लागेको पार्टी किन नहोस्, गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । त्यो भन्न नसकेको दिन तपाईं मृत्युवरण गर्नुहुन्छ । भीड सधैँ सही हुँदैन । र, भीडकै पछि लागेर गन्तव्यको पहिचानसमेत गर्न सकिँदैन ।
यहाँ त सबैलाई भयले गाँजेको छ— भीड सँगै हिँडिएन, भीडको कुरा सुनिएन भने आफूलाई गलत पो भनिहाल्छन् कि !
र त, विश्वराजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने म डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षपाती हुँ । विडम्बना उनलाई धेरैले मन पराउँदैनन् ।
के राप्रपा प्रजातान्त्रिक पनि छाड्दै हुनुहुनुहुन्छ ?
अक्सर धेरैको मनमा उब्जिँदो हो, के रेखा थापाले राप्रपा प्रजातान्त्रिक पनि छाड्दैछिन् ? स्मरण रहोस् रेखा थापा जसरी हुन्छ सत्ता, सुविधा हडप्ने खेलमा छैन । र, राप्रपा पनि त्यतातर्फ नलागोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । कदाचित् पार्टीमा सत्तालिप्सा र सुविधाभोगी चरित्र देखियो भने मैले फेरि पनि सरी भन्नै पर्छ ।
म थकित् र ऊर्जाविहीन मानिससँग बसेर काम गर्न सक्दिनँ । मलाई पद होइन, परिवर्तन चाहिएको छ । मलाई सांसद् बन्ने जुक्ति चाहिएको छैन, देशका तमाम महिलाको मुक्ति चाहिएको छ । आफ्नै लागि सुविधा साँच्न सक्ने होइन, देशका सयकडौँ दिदीबहिनीहरू स्वतन्त्र र आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्न सक्ने बनाउनु परेको छ ।
त्यसका लागि रेखा थापा राष्ट्रपति नै बन्नुपर्छ भन्ने हो र !
हुन त हामीले महिला राष्ट्रपति पनि बनायौँ । सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्याधीश, मन्त्री के मात्र महिला बनाउनौँ ? तर, यी सबै पितृसत्ताका ‘अंशियार’ अझ भनौँ न ‘मतियार’ बने । उनीहरू सब्बै आफ्ना लागि मात्रै बने ।
एउटा घटना सम्झाऊँ—
म ‘मालिका’ सुटिङका लागि विकट बनाइएका, पछाडि पारिएका केही जिल्ला पुगेको थिएँ ।
त्यहाँका आमा दिदीबहिनीलाई सोधेँ— अहिले नेपालको राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ ? विद्या भण्डारीलाई चिन्नुहुन्छ ?
दुःखका साथ भन्नुपर्छ— नेपालको राष्ट्रपतिबारे दूरदराजका महिला अनभिज्ञ छन् । आफूजस्तै महिला राष्ट्रपति बनेकोबारे बेखबर छन् । महिला राष्ट्रपति बनेको लाभ सुदूरसम्म पुगेको भए पो थाहा पाउनू ? उनीहरूले अपनत्वको महसुस नै गर्न पाएका छैनन् ।
महिला राष्ट्रपति भएकै बखत् सुदूरको छाउगोठमा महिला दिदीबहिनी साँपले डसेर मर्न अभिशप्त छन् । बोक्सी भनेर दुव्र्यवहार सहन बाध्य छन् । बलात्कार, घरेलु हिंसाका सूचकांकले सीमा पार गरिसक्यो । सुदूरका आँगनमा २५—३० वर्षमै महिला वृद्ध बन्न विवश छिन् । बालविवाह, दाइजो जस्ता कुसंस्कारले महिलालाई मान्छे भएर बाँच्न दिएको छैन । फगत श्रीमान्को बच्चा पाइदिने, उनीहरूकै चुल्होचौको रुँगिदिने, उनीहरूको वासना पूर्ति गरिदिने यन्त्रमानव बन्न अभिशप्त छन् ।
विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएकै बेला महिला पलपलमा मरेर बाँच्नुपर्छ । समाजको नारीको जीवन अस्तित्वहीन छ भने महिला राष्ट्रपति छिन्, भइन् नि भन्नेर गर्व गर्नुको के उपादेयता ?
महिला सत्तामा पुग्नेबित्तिकै महिलाको कायाकल्प हुने भए पुरुषको भाग्य त फेरिइसकेको हुनुपर्ने थियो होइन र ? सदियौँदेखि सत्तामा त पुरुष नै छन् ।
फेरि तिनै महिलालाई महिले सोधेँ— के तपाईं अर्को जुनी पनि छोरी नै भएर जन्मन चाहनुहुन्छ ?
उनीहरूले समवेत श्वरमा भनेँ— नाईं.....!
छोरी भएर जन्मिएवापत् पाउनुनपाउनु हण्डर, गोता पाएका, पितृसत्ताको साङ्लामा बाँधिएर घरद्वार नाघ्न नपाएका निरीह आमाहरू धरधरी रोए र भनेँ, “अर्को जुनी त के सात जुनीसम्म महिला भएर जन्मलिनु नपरोस् । भगवान् छन् र सुन्छन् भने हाम्रो कोखमा छोरी जन्म लिन नआऊन् । यो देशको माटो छोरी हुर्कन र छोरी, मान्छे भएर बाँच्न अनुकूल छैन ।
आफैँ भन्नुहोस्, पितृसत्ताले तोकिदिएको ‘कोटा’मा जतिसुकै महिलालाई पद, प्रतिष्ठाको पगरी गुथाए पनि हाम्रा आमा, दिदीबहिनीको आँसु, रगत बग्न रोकियो त ? कहाँ आयो, कसलाई आयो परिवर्तन ?
अतःएव लडाईं अझै जारी छ । एक्लै किन नहोस् रेखा थापा लड्दैछे ।
समकालीन नेता; कान्तिहीन अनुहार
धेरैको जिज्ञासा हुनसक्छ, समकालीन राजनीतिमा रेखा थापाको रोजाइको नेता को हो ?
म भन्छु— समकालीन राजनीतिमा त्यस्तो ऊर्जावान् नेता कोही छैन । जसले परिवर्तनको सुनामी ल्याओस् । सब थकित्, अघाएका, पुगिसरी आएकामात्रै छन् । मुलुक परिवर्तन उनीहरूको सपना होइन, लक्ष्य पनि छैन ।
समृद्धिको एक पाने कागज तयार पारेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिम त्यही बासी भाषण सुनाउँदै हिँड्छन् । मुलुक परिवर्तनको सपना भन्दा एक—अर्काको आलोचना सुन्दासुन्दा जनता प्रताडित भइसके ।
जसरी हुन्छ सत्ता हडप्ने, घुमिफिरी उही बासी, पुरानै रुम्जाटार जाने थोत्रो बसमा चढेका छन्, कहाँ पुगेर दुर्घटनामा पर्ने हो, तमाम सपनाको चिहान खडा हुने हो यसै भन्न सकिँदैन ।
यो देशमा जनता कति होलान् ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने छैन । सबै पार्टीका कारिन्दामात्रै छन् । ‘युवा’ त झन् छँदै छैनन् । मान्छे उमेरले मात्र युवा हुँदैन । युवा हुनका लागि नवीन सोच र चिन्तन अनिवार्य शर्त हो । पार्टीको हनुमान, बन्द बाकसभित्रको कठपुतली बन्ने र युवा हुँ भनेर गर्व गर्नुको कुनै तुक हुँदैन । जब स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ र राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने विवेक बाँकी रहन्छ तवमात्र ऊ युवा रहन्छ । उमेरको २०—२५ले केही अर्थ राख्दैन ।
चुनावताक खुब सुनेँ—जन्मजात ऊ कांग्रेस, कोही एमाले, कोही राप्रपा !
जन्मँदा त उसको अलग अस्तित्व पो हुनुपर्छ । उही राजनीतिक दलको पिछलग्गु ? यस्तो पनि हुन्छ ?
यस्तो आदिम चेतले समृद्धिको चन्द्रमामा पुगिँदैन ।
तपाईंलाई थाहा छ— गौतम बुद्ध युवावस्थामा किन निराश भएर मोक्षको खोजीमा निस्किए ?
सहज उत्तर छ— उनलाई गुमराहमा राखियो । सत्यबाट निकै टाढा पुर्‍याइयो । साँचो अर्थमा जीवन जिउन दिएन । र त, उनी त्याग गर्न तत्पर भए ।
हेर्नुहोस् त रोग, भोक, शोकको सिकार बनेका युवा पुस्ता । अभाव, पीडा, बेरोजगारले दिनहुँ खिँइदै गरेका अनुहार । आफ्नो निधारमा अर्कैले कोरिदिएको भाग्यरेखा बोकेर बाँच्न विवश हुँदा पनि मुक्तिको चाह छैन उनीहरूमा । मोक्ष प्राप्तीको अभिताप छैन ।
अमुकअमुक सिद्धान्त र वादको ‘रक्सी’ पिएका छन्, ह्याङ उत्रँदा कहाँको नालीमा मुन्टो गाडिइरहेको हुने हो अनिश्चित छ ।
केही छैन, आम युवा पुस्ताको परिवर्तनको अभिभारा रेखा थापा एक्लै बोकेर हिँड्न तयार छे । हिँडि पनि रहेकी छे ।
जंगबहादुर जन्माउने रहर छ !
जहाँ जान्छु एउटै सुस्केरा सुन्छु— देशमा परिवर्तन कहिले होला । समृद्धिको गन्तव्य कति टाढा होला । राष्ट्रियताको जगेर्ना कसले गर्ला ?
मलाई त एकपटक पुनः पृथ्विनारायण शाह चाहिएको छ । उनलेमात्रै उन्न सक्छन्, सबैलाई एकताको सूत्रमा । मलाई जन्माउन रहर छ जंगबहादुर— उनले मात्रै अन्त्य गर्न सक्छन्, बेथिती ।
र, एउटा कुरा भनुँ— देशमा ढिलोचाँडो जंगबहादुरले जन्म लिन्छन्, चाहे छोराको रूपमा होस, या छोरीको रूपमा किन नहोस् । मेरो भित्री इच्छाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले जंगबहादुरको नारी संस्करण देख्न चाहेको छु । र, त्यो पूरा हुने दिन टाढा छैन ।